Shirkadda Daabacadda Ee Hema Books: Hirgeliyihii Hawsha Manhajka | Hangool News
Shirkadda Daabacadda Ee Hema Books: Hirgeliyihii Hawsha Manhajka
Wasaaradda waxbarashada Somaliland ayaa diyaarisay manjadka dugsiga hoose dhexe iyo sarreba oo ahaa kuwo aan hore u diyaarsaneyn. Dedaal dheer oo wasaaradda waxbarashada Somaliland gashay waxay ku guuleysatay in ay ka faro-xalato guud ahaan manhajka waxbarasho ee Somaliland oo ardaydu baahi wayn u qabeen.
Wasaaradda waxbarashada oo uu markaasi wasiir ka ahaa Cabdilaahi Ibraahin Habbane waxa loo baahday daabicista manhajka ay diyaarisay wasaaraddu. Ugu danbeyntiina qeybaha kala duwan ee warbaahinta sida; Journalka ayaa lagu xayeysiiyey in wasaaraddu u baahan tahay shirkad dalka laga leeyahay oo daabacda manhajkaasi. Waxaana qandaraaskaasi daabacadda buuggaag ee manhajka ay diyaarisay wasaaraddu u tartamay 5 shirkaddood oo wax daabaca, ugu danbeyntii se waxa ku guuleysatay shirkadda Hema Books.
2016-kii ayay ahayd markii shirkadda daabacadda ee Hema-books ay heshiis la gashay wasaaradda waxbarashada Somaliland – heshiiskaasi oo ahaa in la daabaco buuggaag ku dhow hal milyan oo buug oo naqshadeysan oo markaasi noqonaya manhajka Somaliland, kaddib markii ay ku guulestay qandaraaskaasi wasaaraddu soo bandhigtay.
Tan iyo intii Somaliland ay madaxbanaanideeda la soo noqtay ee la yagleelay dugsiyada waxbarashada Somaliland waxa daabacadda manjahka ka caawin jiray shirkaddo shisheeye.
Dhawr jeer, gaar ahaan guyaalkii 2014ka iyo 2015ka oo ay Somaliland isku dayday in ay dib u habayn ku samayso manhajkeed waxa xannibaad ku noqday ciddii dammaanad qaadi lahayd qarashka daabacaadda buugaagta. Markaa waxa ay noqotay in la helo cid qiime jaban ku daabacda buugaagta, hadhawna la soo noqota qarashkii ka galay. Waxa ay noqotay in laga tashado hannaankii looga wareegi lahaa qaadhaan-bixiyeyaasha caqabadda ku noqday himiladii horumarinta manhajka Somaliland. Waxa loo baahday in la qaato go’aan adag oo caqabadaasi lagaga gudbo ugu danbeyntiina waxa nasiib u yeelatay shirkadda Hema-books in ay sacabadda u dhigato dhammaan wixii loo baahan yahay.
Hema Books iyo wasaaraddu waxa ay isla qaateen in buugta dugsiga hoose lagu iibiyo $1.5, kuwa dugsiga sarena waxa loo qoondeeyay $3. Sidaas awgeed waxa uu ardayga dugsiga hoose sannadkii ku iibsanayaa buugaagtooda $9, maadaama oo uu qaadanayaan lix maaddo. Ka dugsiga sarena waxa sannadkii ugu badnaan ka baxaya $30, maadaama oo la barayo 10 maaddo. Ardaydu si wadar iyo keli ahba buugaagta way u iibsan karaan.
Waxa haddaba xusid mudan in shirkadda Hema-books ay suurtogelisay maalgelisay in manhajka Somaliland loo daabaco si madax bannaan. Sidoo kale Hema-books ayaa noqotay shirkaddii koobaad ee si heersarre iyo tayoba leh in ay u daabacdo manhajka Somaliland.
Ugu dambayntii waxa ay Hema-books ayaa noqotay shirkad kaallin iyo dedaal waynba ka gashay kor u qaadista waxbarashada Somaliland gaar ahaan manhajka Somaliland.